"Chofoza kwesokudla + Thumela Okunamathiselwe ngeThunderbird" ku-KDE | Kusuka kuLinux
"Chofoza kwesokudla + Thumela Okunamathiselwe nge-Thunderbird" ku-KDE
IDolphin ngilokhu ngithi yiyona kude futhi kude imenenja yefayela ehamba phambili laphaya namuhla. Lokhu engikukhombisa kona esithombeni yebo, uNautilus futhi mhlawumbe nabanye bayakwenza, kepha kuyindlela okungenani enginethezeke ngayo 🙂
Kufanele ngithumele amanye amafayela / imibhalo nge-imeyili, futhi kufanele ngivule i-imeyili entsha, ngichofoze inkinobho yokunamathisela bese ngibhekabheka ifayela, ngiyithola icasula kakhulu 🙂
Umbhali walokhu ngu danux, futhi ukuba nalokhu nazi izinyathelo:
2. Kuwo bhala okulandelayo bese ucindezela [Faka]:
3. Ifayela «122832-thunderbird_attachment.desktop«, Kumele bakopishele kulo ~ / .kde4 / share / kde4 / services futhi ngomumo. Vala uphinde uvule ihlengethwa (Isiphequluli Sefayela) futhi bazobona inketho 🙂
Umbhali wenze ukuguqulwa kufayela, wenza isithonjana sibonise kuphela uma iThunderbird ingama-64bits, uma usebenzisa ama-32bits (njengami) esikhundleni sokubeka umugqa osuka esinyathelweni # 2, beka lena:
Futhi-ke, akukho okunye ongangeza.
Noma yikuphi ukungabaza noma umbuzo, inkinga noma yini abangitshela yona.
Namathisela i-thunderbird ku-KDE-Apps.org
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » "Chofoza kwesokudla + Thumela Okunamathiselwe nge-Thunderbird" ku-KDE
Lokhu bekuvela ngaphambi kokuthi ngihlangane nebhulogi ye-xD. Ngabe uyazi noma iyiphi inketho yokwenza okufanayo kodwa ku-gnome nge nautilus =
Kulungile, angishongo lutho, kuMint umsebenzi usuhlanganisiwe ne-thunderbird 🙂, ngendlela efanayo nezenzo ze-nautilus ezingenziwa kunoma yiliphi iklayenti leposi.
Sawubona, ngisebenzisa i-fedora 19 futhi anginayo ifolda ./kde4 ekhaya lami. Uma ngakha yonke le ndlela ~ / .kde4 / share / kde4 / services bese ngilingisa ifayili lapho, lizosebenza noma ngifaka engcupheni yokwephula okuthile ku-kde?
Sawubona, ngiyabonga ngempela. Kade ngikufuna kakhulu lokhu futhi kwafika kahle! ngiyabonga nakuDanux !!!
I-Fromlinux isivele inezivakashi ezingaphezu kuka-100
Izizathu ezi-4 ezinhle zokuzama ukuvulaSUSE 12.1